Jacayl uu Jeel Ogaadeen kala dhantaalay ee jabhadnimo u horseeday caruusad ONLF ku jirtay - BBC News Somali
Jacayl uu Jeel Ogaadeen kala dhantaalay ee jabhadnimo u horseeday caruusad ONLF ku jirtay
Image caption Nicmo Sheekh Maxamed Digil
''Waxay saygeyga ku maageen ma aqaano, jeel Ogadeen ayaa la geeyay, 9 sano ayuu halkaas ku xirnaa, hadda Jigjiga ayaan iskugu nimid isaga oo jeelka ka soo baxay iyo anigoo ciidan ah'' ayey tiri Nicmo Sheekh.
Sidoo kale waxay BBC-da u sheegtay in aabeheedna la xiray oo iyada iyo ciyaalkii la dhashayba ay ku soo koreen aabo la'aan, balse hadda ehelkeedii iyo aabaheedba waa la soo daayay.
''Ma aha in uu dhamaaday halgankii iyo dhibkii aan waxan u soo marnay, balse siyaasadda ayaa dhan qabow isku badashay, xagga qabow ayaan kaga miro dhalin doonnaa, haddi ay xitaa ka fursan weydo oo kulayl nala gasho, inaan geeriyoono mooye kama hari doonno oo kama tanaasuleyno halganka'' ayey tiri.
Nicmo Sheekh Maxamed Digil ayaa hadda magaaada Jigjiga kula nool saygeeda waxayna sheegtay inay hadda u diyaar garoobayaan inay ilmo helaan haduu Alle siiyo, maadama markii hore la kala waday oo wax ilmo ah aysan isku dhalin. Nimco weli ma aaminsana in hadafkeedi ay gaartay, waxayna sheegtay in xabadda uun ay joogsatay, ayna weli ku han weyn tahay inay aragto "calanka Ogaadeenya" oo kaligii taagan.